Dị, Image | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Style, Image
Otu esi ehicha ihe ndozi edo edo - uzo 6
Ihe na 03.10.2019 03.10.2019
Goolu bu ọla di nma ma di onu ahia, ma oge o nwere ike ghara idi elu ya na uzo ya. Ihe ịchọ mma ọla edo - pendants na pendants - na-abụ ihe ruru unyi ma na-agwụ, kpuchie ya na plasta. Ha…
Otu esi ewepu agba na jeans: usoro site na ntuziaka
N'inwe uwe ogologo ọkpa kachasị amasị ha na eserese ahụ, ọtụtụ ndị hiere ụzọ kwenyere na ị nwere ike tufuo ha n'enweghị nsogbu. Ndị kachasi ike na-ekpebi ime mkpụmkpụ ha, ma ọ bụrụ na ịdị elu nke ntụpọ ahụ kwere ya. Ma kwenye m, nke a dịkwa ...
Ákwà ụlọ maka ụmụaka na ndị okenye: nha, otu esi ahọrọ
Ihe na 15.09.2019 23.10.2019
Ọ gaghị ekwe omume ịtụle mkpa ọ dị ịhọrọ akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị maka ịgba egwu. Ndi n'agba egwu ji mara nke a. Iji nweta ikike, ha ga-etinye nnukwu akụkụ nke oge ha na ọzụzụ. Ma ọ bụrụ na eziokwu ...
Uwe ụmụ nwanyị na-acha anụnụ anụnụ bụ akụkụ dị mkpa nke wodrobu
N'ụzọ dị oke egwu, mana ụmụ nwanyị na-ele anya mara oke mma ma mara mma na uwe ụmụ nwoke. N'ezie, nke a abụghị maka ihe niile dị na akwa nke nwoke na nwanyị, kama ọ bụ tuxedo na ahụ gba ọtọ ma ọ bụ nke ahụ ...
Ldị Lolita: Nkọwa, Ekike
Ihe na 15.09.2019 24.10.2019
Lzọ Lolita bụ ihe omimi mbụ nke 70s, nke ewu ewu ọtụtụ iri afọ. A na-ahụta Japan ka ọ bụrụ ebe omumu nke ntụzi aka ejiji a, nke nabatara ụfọdụ atụmatụ nke Rococo na Baroque, mana otu aha ...
Gịnị bụ ezigbo ọla edo? Njirimara, ihe mejupụtara, ihe nlele na ọnụahịa kwa gram nke ezigbo ọla edo
Ndị mmadụ hụburu n’anya jiri ngwa dị iche iche chọọ ozu ha mma. Ọ bụrụ na ọtụtụ afọ gara aga, chaplet, ụdọ, ọla aka, mgbaaka na ọla ntị bụ ihe a na-eyi dịka ọmarịcha okpukpe na talismans, mgbe ahụ ...
Blouse-body “Grace silhouette” (“Avon”) - nyocha ndị ahịa na ndị na-eyi uwe elu nwanyị a
Ihe na 15.09.2019 25.10.2019
Nwanyị nkịtị adịghị adabara nke ọma na jeans, uwe ogologo ọkpa, na uwe mwụda. "Etu" na-apụta n'úkwù, nke siri ike ịlụ ọgụ, n'ihi na ịchọrọ inyocha ha mgbe niile. Nwanyị ukwu nwanyị dị otú ahụ na-ama jijiji ma na-elekọta ya mgbe niile ...
Unisex - kedu ihe ọ bụ? Kedu otu esi egosipụta uwe ejiji unisex na uwe, ihe na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ?
N’ụwa nke oge a, enwere ọtụtụ echiche dị iche iche; ụfọdụ na-apụ n'anya dị ka enweghị isi, ndị ọzọ bilitere. Isiokwu a ga - aba uru maka ndị chọrọ ịghọta okwu dịka unisex: kedu ihe ọ bụ ...
Anorak Nike ga-abụ ihe ejiji oge niile
N'ihe ejiji, ihe ndị dị na uwe egwuregwu na-ebukarị ọnọdụ mbụ. Ọ bụghị afọ mbụ ka Jaketị ma ọ bụ ikuku na-ekwo ekwo ekwogoro n'ọnọdụ ndị kachasị n'ọkwá. Anorak Nike batara ebe ahụ ngwa ngwa ozugbo…
Nwa ara (ntutu isi nke Venus). Foto, Njirimara na uru
Ihe na 15.09.2019 26.10.2019
Otu n'ime ihe ndị a ma ama na okwute ama ama bụ quartz. Ihe ndị a ma ama bụ n'ihi ihe ndị e ji achọ mma na ọnụ ahịa ala dị ala. Otu n'ime ụdị ihe dị iche iche dị iche iche na-adọrọ mmasị bụ ntutu isi, nkume nwere ntutu aha uri.
Ihe nzuzo Style: Otu esi eyi Beret
Ejikọtara okwu a "beret" na onyonyo nke ụmụ nwanyị French mara mma nke nwere isi mara mma na ntutu ha. N'egwuregwu ọgbara ọhụrụ, nke a bụ njirimara nke amara ndị Parisi, ihe nnọchianya nke nwanyị na nghọta. Ma oburu na ndi nwanyi French na ndi…
Kedu ihe bụ ogologo aka, na ihe ị ga-eyi ya?
Ndi n’amaghi ihe ogologo mkpuchi ogologo furu otutu. E kwuwerị, ihe a bụ otu n'ime adaba adaba. Nke a bụ uwe elu nwere ogologo akwa nke ejiri akwa mara mma na nke dị nro…
Rose na flask - usoro ohuru rue mgbe ebighi ebi
Ifuru - ihe mbu na - abia n’uche mgbe nwoke choro imeri nwanyi. Ihe nnọchianya nke mmetụta ịhụnanya, oke agụụ, ịhụnanya na oke agụụ, ha bụ nkwenye nke mmetụta na njiri mara nke inye ihe ụtọ. Rose na…
Balenciaga (isi): nkọwa na - esi isi, ndị na - emepụta ya na nyocha
"Balenciaga" - ihe na-esi ísì ụtọ, nke bụ naanị otu ụzọ isi nweta ego maka ụlọ ejiji otu aha. Cristobal Balenciaga bụ onye couturier nwere nkà nke mepụtara uwe ndị mara mma na ngwa ndị a na-ahụ anya. Akpa nke ika a bu ihe ewu ewu ...
Kedu agba dị iche iche nke khaki na uwe na-aga?
N'oge na-adịbeghị anya, ụdị ndị agha alaghachilaghachi na ejiji, nke jikọtara ya na atụmatụ agba nke khaki. Ọ bụ ihie ụzọ iche na ụdị akpọrọ "agha" agba dabara na ụmụada ndị nwanyị mara mma na ndị na-enwu gbaa. Maka…
Ịhọrọ ebe ịzụta jaket ala na Yekaterinburg
O zuru ezu ịzụta jaket dị ala otu oge maka oge oyi, mgbe ị ghọrọ onye na-akwado ụdị uwe a. Maka ndị Russia, ndị nnapụta a na-ekpo ọkụ na-agbadata site na ihu igwe na-ekpo ọkụ bịara nwee ịhụnanya maka ịdị nro ha na njiri mara oke ọkụ. Down Jaketị ogologo oge ...
Candice Swanepoel: nhazi ihe eji eme ihe, nkọwa ntinye na ụdị ndụ nke onwe (foto)
Ofwa nke ejiji bụ ụlọ ọrụ maka mmepe nke na-emefu ijeri dollar kwa ụbọchị. Na-agbapụ maka akwụkwọ akụkọ, na-egosi nchịkọta ọhụụ, na-emepe emepe ọhụụ, na-achọ ndị na-ese foto na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ na-echegbu ndị na-ese ihe, ndị na-emepụta ejiji, ndị na-ede akwụkwọ ...
Kedu ụlọ ọrụ ịzụta uwe oyi maka snowmobile? Uwe Oyi Kemịkalụ: Ugo
N'oge na-adịbeghị anya, ọ bụ ihe ejiji ugbu a iji ifịk nọrọ ezumike oge ezumike n'èzí. Ọ bụrụ n’iru ndị bi n’ala anyị họọrọ ụlọ mara mma n’oge oyi, ugbu a kwa afọ…
Factorylọ ọrụ Fur "Kalyaev": nyocha ngwaahịa
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na nwanyị ejiji bụ nwanyị na-agbanwe agbanwe, uwe mkpuchi ajị anụ mara mma ga-abụ ihe ngosipụta nke uwe ụmụ nwanyị ọ bụla. Ọ baghị uru ichetụ n’echiche uwe zuru oke nke ga-eme ka obi dị gị mma na ọnọdụ gị ...
Kedu otu esi eyi akwa mkpuchi ụbịa ụmụ nwoke?
Site na mmalite nke oge mgbụsị akwụkwọ oyi, karịa mgbe ọ bụla, a na-ahụ mkpa ọmarịcha uwe elu na-ekpo ọkụ. Nhọrọ kacha mma maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke bụ uwe. Ihe ndi uwe aji a ka ahoputara kemgbe…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,474.